Kitra – Tompondakan’i Afrika : resy 3 no ho 2 ny Cnaps Sport fa tafita ihany | NewsMada
Kitra – Tompondakan’i Afrika : resy 3 no ho 2 ny Cnaps Sport fa tafita ihany
Manohy ny diany ny Cnaps Sport, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra. Na resin’ny Township Roller aza, ny ekipa malagasy mbola tafakatra amin’ny dingana manaraka.
Miakatra eo amin’ny ampaha-16 –ndalana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ny Cnaps Sport. Na resin’ny Township Roller, tamin’ny isa 3 no ho 2 teo amin’ny lalao miverina, natao tany Gaborone ny asabotsy lasa teo aza ny Cnaps Sport dia tafita. Nanantombo teo amin’ny isan’ny baolina tafiditra an-tanin’olona ny Malagasy na dia mitovy 4 sy 4 aza ny roa tonta.
Raha tsiahivina, efa nandresy tamin’ny isa 2 no ho 1 tamin’ny lalao mandroso ny Cnaps Sport ary mbola nahafaty baolina roa an-tanin’olona, ka nahazoany tombony. Raha hiverenana ny lalaon’ny roa tonta, ny Malagasy no nahafaty baolina voalohany tamin’ny alalan’i Niasexe, teo amin’ny minitra faha-12, taorian’ny tolotra tsara avy amin’i Bora. Efa tany amin’ny minitra faha-30 tany kosa vao nahasahala ny isa ry zareo Botsoane. Baolina matin’i Lemponye Tshireletso, taorian’ny «corner», nodakan’i Segolame Boy. Io isa 1 sy 1 io no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nandaitra ny “coaching”
Nitarika an’isa 2 no ho 1 ny Township Roller, teo amin’ny minitra faha-62 rehefa nahatafiditra “penalty”, i Edwin Moalosi. Fahadisoana nataon’ny vodilaharana malagasy, tao anaty faritra tsy azo ivalozana, nahazoany izany. Nanolo mpilalao i Typeh, mpanazatra malagasy taorian’io, ka nesorina i Niasexe ary nampidirina i Eric. Nahitam-bokany izany paikady izany satria afaka nanasahala ny isa ny Cnaps Sport, tamin’ny alalan’i Eric, teo amin’ny minitra faha-66. Teo dia efa nazava ny lalan’ny Malagasy satria tsy maintsy mitady isa roa ambonin’ny Botsoane vao afaka. Roa minitra taorian’izay anefa nahafaty ny baolina fahatelo ho azy ny Township Roller, izay vitan’i Segolame Boy. Efa nanidy trano fotsiny nefa sisa no nataon’ny Cnaps Sport ka tsy nahita hirika intsony ny Botsoane.
Ny Coton Sport avy any Kameronina no hihaona amin’ny Cnaps Sport manaraka ka ny 11 marsa any Yaounde ny lalao mandroso ary ny 18 marsa kosa ny fihaonana miverina eto Madagasikara. Raha tsy misy ny fiovana dia eny amin’ny kianja Centre complexe Vontovorona hatrany no hanaovana io lalao io.